Iindaba - Buyintoni ubudlelwane phakathi koxinzelelo lweminyaka ephakathi kunye nokubekwa kukaTau?
Ngokutsho kophando olutsha ngabaphandi be-UT Health San Antonio kunye namaziko amaqabane ayo, abantu abaneminyaka ephakathi kunye neempawu zokudakumba baphatha iprotheni ebizwa ngokuba yi-APOE.Ukuguqulwa kwe-epsilon 4 Kusenokwenzeka ukuba kuvelise i-tau buildup kwiindawo zengqondo ezilawula umoya kunye nememori.
Iziphumo zapapashwa kushicilelo lukaJuni 2021 lweJenali yeSifo se-Alzheimer.Uphononongo lwalusekelwe kwiimvavanyo zokudakumba kunye ne-positron emission tomography (PET) ye-imaging yabathathi-nxaxheba be-201 kwi-multigenerational Framingham Heart Study.Umndilili weminyaka yabathathi-nxaxheba yayingama-53.
Amathuba okufumana isifo amashumi eminyaka ngaphambi kokuxilongwa
I-PET idlalwa ngokuqhelekileyo kubantu abadala, ngoko i-Framingham STUDY kwi-PET kwiminyaka yobudala iyingqayizivele, utshilo uMitzi M. Gonzales, umbhali okhokelayo wokufunda kunye ne-neuropsychologist kwi-Glenn Biggs Institute ye-Alzheimer's disease kunye ne-Neurodeergenerative Diseases, eyingxenye ye IYunivesithi yaseTexas yeZiko lezeMpilo e-SAN Antonio.
"Oku kusinika ithuba elinomdla lokufunda abantu abaneminyaka ephakathi kunye nokuqonda izinto ezinokudibaniswa nokuqokelelwa kweeprotheni kubantu abaqhelekileyo ngokwengqondo," kusho uDkt Gonzales."Ukuba aba bantu baqhubela phambili nokuphuhlisa isifo sengqondo esixhalabisayo, olu phononongo luya kuveza ezo zinto zinokwenzeka kumashumi eminyaka ngaphambi kokuxilongwa."
Ayinanto yakwenza ne-beta-amyloid
IBeta-amyloid (Aβ) kunye neTau ziiproteni eziqokelelana ebuchotsheni babantu abanesifo sika-Alzheimer kwaye zidla ngokunyuka ngobunono nangokukhula.Uphononongo alufumananga unxulumano phakathi kweempawu zokudakumba kunye nokudakumba kunye ne-beta-amyloid.Yayinxulunyaniswa kuphela noTau, kwaye kuphela nabathwali be-APOE ε4 mutation.Malunga nekota yezigulana ezingama-201 (47) zithwele ijini engu-ε4 kuba babene-allele enye ubuncinane.
Ukuthwala ikopi enye yofuzo lwe-APOEε4 kwandisa ingozi yesifo se-alzheimer ngokuphindwe kabini ukuya kwezintathu, kodwa abanye abantu abaphethe uhlobo oluthile lwemfuza banokuphila ukuya kuma-80s okanye ama-90s ngaphandle kokufumana isifo."Kubalulekile ukukhumbula ukuba ngenxa yokuba umntu uchongiwe ukuba uthwele i-APOE ε4 akuthethi ukuba uya kuphuhlisa ingqondo yengqondo kwixesha elizayo," kusho uDkt Gonzales.Ithetha nje ukuba iingxaki ziphezulu. "
Iimpawu ezixinzelelekileyo (uxinzelelo ukuba iimpawu zinzima ngokwaneleyo ukuhlangabezana nalo mqobo wokuxilonga) zavavanywa ngexesha le-PET imaging kunye neminyaka eyisibhozo ngaphambi kokusebenzisa i-Epidemiological Research Centre Depression Scale.Iimpawu zokudakumba kunye nobudlelwane phakathi kokudakumba kunye neziphumo ze-PET ngamaxesha amabini ahlolwe, alungelelanise iminyaka kunye nesini.
Amaziko ngokweemvakalelo kunye nokuqonda
Uphononongo lubonise unxulumano phakathi kweempawu zokudakumba kunye nokunyuka kwe-tau kwimimandla emibini yengqondo, i-cortex ye-entorhinal kunye ne-amygdala."Le mibutho ayithethi ukuba ukuqokelela kwe-tau kubangela iimpawu zokudakumba okanye ngokuchaseneyo," kusho uDkt Gonzales."Siqaphele ezi zinto zimbini kuphela kwi-ε4 abathwali."
Uye waqaphela ukuba i-entorhinal cortex ibalulekile ekuhlanganiseni inkumbulo kwaye ithande ukuba yindawo apho ukubekwa kweprotein kwenzeka kwangoko.Okwangoku, i-amygdala icingelwa ukuba yindawo yeemvakalelo zengqondo.
"Izifundo zexesha elide zifunekayo ukuze ziqonde ngakumbi okwenzekayo, kodwa kunomdla ukucinga ngemiphumo yeklinikhi yeziphumo zethu ngokubhekiselele kumgaqo wokuqonda kunye nokuziphatha," kusho uDkt Gonzales.